Kuchaja Pile, China Kuchaja Pile Vagadziri, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd.
Iyo New Energy Project
Kudzivirirwa Kwezvakatipoteredza & Kuchenesa Mvura Project
Yakazara Seti yeMechanical uye Magetsi Equipments
Intelligent Operation uye Maintenance Service
Imba>Products Supplier>Kuchaja Pile
Basa remurwi wekuchaja rakafanana negasi dispenser mune gasi chiteshi. Inogona kugadziriswa pasi kana kumadziro uye kuiswa muzvivakwa zveveruzhinji (zvivakwa zveveruzhinji, nzvimbo dzekutengesa, nzvimbo dzekupaka dzeveruzhinji, nezvimwewo) uye nzvimbo dzekugara nzvimbo dzekupaka kana zviteshi zvekuchaja. Inogona kuve yakavakirwa pamatanho emagetsi akasiyana nechaji mhando dzakasiyana dzemotokari dzemagetsi. Iyo yekupinza yekupedzisira yemurwi wekuchaja yakabatana zvakananga kune iyo AC grid, uye iyo inobuda inopera ine plug yekuchaja yekuchaja mota dzemagetsi.
HNAC inopa mhando nhatu dzezvigadzirwa: AC&DC Yakabatanidzwa yekuchaja murwi, AC yekuchaja murwi uye DC yekuchaja mirwi zvigadzirwa. Mirwi yekuchaja inowanzopa nzira mbiri dzekuchaja: kuchaja kwakajairika uye kuchaja nekukurumidza. Vanhu vanogona kushandisa kadhi rekuchajisa kutsvaira kadhi pane yemunhu-kombuta yekudyidzana interface inopihwa nemurwi wekuchaja kuita maoparesheni senge nzira yekuchaja inoenderana, nguva yekuchaja, uye mutengo wekudhinda data. Iyo yekuchaja murwi inoratidzira skrini inogona kuratidza data senge yekuchaja huwandu, mutengo, uye yekuchaja nguva.
Chigadzirwa chinoenderana nemapiru ekuchaja:
1. Kuchengetedza magetsi uye kushanda kwepamusoro: Nezvikamu zvepamusoro-soro uye kuenderera mberi kwekugadzirisa kweparameter dhizaini, uye advanced control algorithm, iko kutendeuka kunoshanda kwakakwira kusvika ku97%, kuderedza nguva yekuchaja uye kurasikirwa kwekuchaja, kuvandudza ruzivo rwevashandisi, uye kugadzira mabhenefiti akakwirira. kune vatengi;
2. Yakachengeteka uye yakavimbika: Nekuisa pamusoro / pasi pemagetsi, kubuda pamusoro-voltage / pamusoro-ikozvino, pamusoro tembiricha, kuvuza, kudzivirira mheni uye mamwe mabasa ekudzivirira, kubuda pasi pemagetsi alarm, chengetedza kuchengetedzwa kwezvigadzirwa nevashandisi mune zvese- round way;
3. Kugadzikana kwepamusoro: Module yekuchaja ine tekinoroji ine patent, uye yakapfuura iyo yakasimba kuvimbika bvunzo uye yakanyanyisa nharaunda bvunzo isati yasvika; iyo imwechete module mumurwi ichave yakaparadzaniswa kubva kune system mushure mekukundikana, iyo isingakanganisi basa rose rehurongwa;
4. Kukura diki, kuderera kwekugara kwevhu: Nekunyanya kusimba kwesimba uye kana ichienzaniswa neyakafanana zvigadzirwa mumusika, ine zvimiro zvehukuru hudiki, kushomeka kwekugara kwevhu, iyo inochengetedza zvinhu uye kushandiswa kwevhu uye inoderedza kutanga kwekudyara;
5. Yakasimba kuchinjika kwezvakatipoteredza: -30 ℃-65 ℃ kushanda tembiricha renji, IP54 kudzivirira mwero, nyore kurarama nemamiriro ekunze akasiyana uye mamiriro ekunze.
Turbine Inlet Valve yeButterfly Valve, Spherical Valve uye Gedhi Valve
Matatu-chikamu AC Synchronous jenareta
Alternating Current System uye Direct Current System (AC&DC System)
Liquid (Mvura) Level Meter, Radar Current Meter uye Flow Meter
Nhamba 609 Lusong Road, LuGu, Changsha, Hunan, China